Xusuus La’aan Dhibaato Makugu Haysaa?? - Daryeel Magazine
Xusuus La’aan Dhibaato Makugu Haysaa??
Dad badan ayaa mudooyinkaan dambe la dhibaateysan xusuusta oo daciifta,waxaa jira tusaalooyin marka aad dareento inaad raadineyso magacyo ama ereyo horey aad u taqaaney, laakin carabkaagu soo qaban waayo, haseyeeshee murugadu waxey tahay maskaxdaadu si buuxdo uma shaqeyneyso.
Arimaha noocan ah ee maqnaashaha maskaxdaada ama xusuus lumida waxey dhacdaa marka aad daalan tahay,culeysuu ku haayo( Stress) iyo welwel uu ku haayo.
1- bilow inaad calaashato xanjo, Marka loo eego machadka caafimaadka Baylor ee ku yaala Houston US. Calaalinta xanjada waxey kor u qaadaa feejignaanta.
2- Raadi inaad uriso doog nadiif ah. Inkastoo arintaani dadka qaar aaney farxadgelineyn,laakin udgoonka dooga nadiifka ah waxey ka caawisaa iney yareyso welwelka iyo iney kor u qaado maskaxdaada. Hadii aadan heysan doog la jaray,waxaan isticmaali kartaa dooga yar yar ee ay xoolaha magaalada loo iib keeno.
3- in aad yareyso qaadashada maadada calorie. tani waxey ka caawineysaa maskaxda iney noqoto mid aad u dareen badan Insulinta,islamarkaana u ogolaata iney hoos u dhigto curinta protien C. Labadaan cunsur waxey ka caawiyaan maskaxda iney hormariso qeybaha maskaxda,sida nutritionist Cynthia Sass
4- Awooda indho caseysiga. In yar oo aad indhaha caseysato ama aad isku daydo nasasho aad seexato waxey dib usoo celisaa awooda maskaxda iyo iney hormariso awooda qofka inuu ka gudbo xaaladii xusuusla aaneed .
5- Dhageyso marka aad seexaneyso qur aanka kareemka sida ay aamin san yihiin dadka reer galbeedka ah wax ku taxalukha music ama wararka redioga. waxaa jiro dad aanan seexan karin ilaa uu helo meel bilaa sanqadh ah . Sikastaba, maqalka shanqadhaha xilliga jiifka waxey kor u dhigaan xusuusta si aad ah.
6- In yar oo dufan ah. Isticmaalka in yar oo dufan ah waxey kaa caawisaa iney gacanka geysato warbixinada xilli hore ahaa ee xusuusta, laakin waa inaad iska hubisaa iney ahaato xadi aad u yar oo aadan badin.
mar hadeeynu nahay dad islaama waxaa haboon hadii aad isku aragto xuusuustaada oo yaraata in aad badisid digariga alle waxa aad heleysaa nolol xasilan waa in aad isku daydaa in ta aad ka xafidsan tahay qur,aanka aad akhridaa taa ayaa noqoneysa mid kaa ka xeysa suusla aanta.
Caadada Soo Daahdo Uur La’aan Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talada Dhakhtarka Hal Koob Oo Biyo Ah Waxay Kaa Badbaadinayaa 10 Dhibaato Caafimaadeed 7 Cashar oo aan ka Bartay Buugga 15 ka Xeer ee aan la qiimayn karayn ee Korriinka. By John Maxwell